Sida loo dayactir VLC ma taageeri Qaabka UNDF
Qaybta 1: Waa maxay qaabka file UNDF?
Qeybta 2: Maxaad VLC siinayaa VLC ma taageeri baadi qaab UNDF?
Qeybta 3: Sida loo dayactir VLC ma taageeri Qaabka UNDF?
Qaabka File UNDF, waa dhab ahaantii, qaabka file undefined. Waxaa loola jeedaa in ciyaaryahanka uu awoodi waayo in la qeexo qaab iyo awoodin in ay u aqoonsadaan. Inta badan, waxaa la arkay in VLC ciyaaryahan , marka aan isku dayno in uu ordo file ah oo si buuxda uma soo bixi.
Sababta ugu weyn ee loogu talagalay VLC ma taageeri baadi qaab UNDF waa download qayb ahaan ama aan dhamaystirnayn oo faylka, oo waxaan isku dayaynaa in uu ordo. Sababta kale ee la khilaafo laga yaabaa file iyo xitaa ay sabab u tahay arimaha qaar ka mid ah gudaha file gudahood. The non-helidda codes ku haboon looga baahan yahay inuu ka ciyaaro file ka walaacsan yahay mid ka mid ah sababaha VLC aan awood u ciyaaro files. Si kastaba ha ahaatee, waxa jira meelo qaarkood, halkaas oo ay xitaa haddii file sax yahay dhammaan dhinacyada, ayaa wajahaya arimaha la mid ah, soo bandhigay fariin "No haboon module decoder: VLC ma taageeri qaab maqal ah ama video ah" undf ".Nasiib, waxaa jira ee ma suuroowdaa jid inaad waxaas u hagaajin. "
Eeg shaashada soo kor ku fariinta qalad la mid ah. Sidaas darteed, xaaladda, haddii aad hubto in aad file waa qumman yahay oo uu jiro qalad sida jirin, waxaa jiri kara tallaabooyinka qaar ka mid ah, oo loo qaadan karo ee loo hagaajin lahaa ee qaladaad sida la VLC Player.
Waxaa lagu talinayaa in Product --- Download, Transfer u maamuli lahayd music aad macruufka / Android Devices
Waxaa jira tallaabooyin qaar ka mid ah in la raaco qamaar saxda ah ee arrinta iyo tallaabooyinka hoos ku xusan waxaa lagu qamaar doonaa 'VLC ma taageeri Qaabka UNDF' arrin. Si loo sameeyo, waxaad u baahan tahay in marka hore loo soo dajiyo oo dhan codes audio iyo video loo baahan yahay ee nidaamka si ay u hesho si sax ah si ay u taageeraan oo dhan qaabab file si hufan on nidaamka.
Waxaad isticmaali kartaa Combined Community codec Pack. Tani Combined Community codec Pack siisaa liis dhamaystiran oo dhan lagama maarmaan audio ama video codes oo waxaa looga baahan yahay in ay haatan ka ciyaari dhawaad ​​qaab kasta file warbaahinta la heli karo.
Waxaad ka arki kartaa snapshots ee Community codec Combined ka Pack iyo hesho gargaarka loo baahan yahay.
Waxaad kala soo bixi kartaa Combined Community codec Pack iyo wixii kaloo loogu sameeyo sida arkay in Screenshot ka.
In hab, Combined Community codec Pack waa pack codec fudud oo aad u waxtar fiican ah, ku haboon cayn kasta oo isticmaala. Waxay bixisaa taageerada buuxda ee file maqal ah iyo video iyo bixisaa xal aad u fudud in dhibaato la xidhiidha Qaabka UNDF ah.
Xalka kale waa in aad isku dayi kartaa nooca ugu dambeeya ee VLC Player, oo marar badan, rectifies qalad ku cad qoraalkii hore. Sidaas, ka hor inta u codec Combined Bulshada Pack, talo waa in ay isku dayaan nooca ugu dambeeya ee VLC ka Player. Halkan waa nooca ugu dambeeya ee Player VLC ka snapshots.
Waxaad tegi kartaa website-ka rasmiga ah http://www.videolan.org/vlc/index.html oo halkaas ka hesho.
> Resource > VLC > Sida loo dayactir VLC ma taageeri Qaabka UNDF?